Blaogim-Piarahamonina GV · Jona, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Ny Blaogim-Piarahamonina Global Voices dia sehatra ho an'ny mpikambana ato aminay hifampizarana ala hamohamo, tantara manokana. Natao ihany koa hieritreretana ny asa iarahana, hifampizarana hevitra sy fijery amin'ny sehatra misy anay. ·
Jolay 2019 85 Lahatsoratra
Jona 2019 100 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Blaogim-Piarahamonina GV tamin'ny Jona, 2019
Fitaovana ilainao ampiasaina amin'ny onjampeo #1: Fanoratana ‘Script’ ho an'ny onjampeo
Mediam-bahoaka30 Jona 2019
GV RADIO: ahoana no fanoratana script ho an'ny onjampeo.
Nisaina izay dikan'ny GV aminy ny GVer Portnoy Zheng avy ao Taiwan.
Fihaonambe GV tao Medellin, Kolombià: Paisa Power ho an'izao tontolo izao
Nahavita nihaona ny vondrona GV tao Medellin, Kolombia, tamin'ny volana Jolay 2016. Fantaro izay nitranga tany!
Sanjib Chaudhary, mpanoratra amin'ny Global Voices teratany, miarahaba avy ao Nepal
Fantaro i Chaudhary, mpanoratra ato amin'ny GV mikasika an'i Nepal, blaogera, mpitsangatsangana, "mpamaky mazoto sy matimatin'ny fanatanjahantena".
30 Jona 2019
Ny Tsy Hakàna Tahaka Fahatany Ny Lahatsoratra GV Iray
vondrom-piarahamonina30 Jona 2019
Torohevitra: aza avoaka an-tambajotra raha tsy te-ho afa-baraka.
Inona no nitranga tao anatin'ny #FihaonanaGV tao Accra?
29 Jona 2019
Vakio daholo ny mikasika ny Accra #GVMeetup!
Mediam-bahoaka29 Jona 2019